Ciidamada Kumaandooska ee Danab oo la wareegay garoonka diyaaradaha Gaalkacyo – STAR FM SOMALIA
Ciidamada Kumaandooska ee Danab oo la wareegay garoonka diyaaradaha Gaalkacyo
Wararka ka imaanaya magaalada Gaalkacyo ayaa sheegaya in xalay maqribkii ay ka dageen garoonka diyaaradaha Gaalkacyo Ciidamada Danab ee sida gaarka ah u tababaran ee ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed.
Sida ay sheegayaan wararka ciidamadan ayaa fariisin ka sameystay qeyb ka mid ah garoonka diyaaradaha Gaalkacyo ee ay maamusho Puntland.
Dadka ku nool Gaalkacyo ayaa hadal haya ciidamada dul degay garoonka diyaaradaha Gaalkacyo, lamana oga ujeedkooda.
Wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamadan ay ka howl galayaan deegaanada Mudug, si ay howl gal uga fuliyaan Koofurta Mudug ee ay ku xooggan yihiin Al-Shabaab.
Howlihii duulimaad ee garoonka diyaarada C/llaahi Yuusuf ee Gaalkacyo ayaa saaka hakad ku jira, iyadoo maalmihii la soo dhaafay la sheegay inay gaabis ahaayeen diyaaradihii imaanayay garoonka.
Ciidamada Danab ayaa waxaa tababara Mareykanka, waxaana horay howl gallo wadajir ah ay la fuliyeen Ciidamo Mareykan ah deegaano ka tirsan Koofurta Soomaaliua.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay maamulka Puntland oo ku aadan Ciidamadan sida gaarka ah u tababaran ee xalay ka degay garoonka diyaaradaha Gaalkacyo.
Al-Shabaab oo xalay madaafiic ku garaacay magaalada Baydhabo